UpSnap: doka amin'ny finday, eo an-toerana ary amin'ny jeografia azo tratrarina | Martech Zone
UpSnap dia manolotra tamba-jotra dokambarotra finday manome fahatsapana mihoatra ny iray lavitrisa isam-bolana. Ary amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasan'izy ireo amin'ny sasany amin'ireo tranokala lehibe indrindra dia afaka mampiseho doka amin'ny tambajotran'olon-kafa amin'ny fahitana maherin'ny 100 miliara isam-bolana. Ny UpSnap dia ahafahanao mikendry ireo mpanjifa izay eo akaikin'ny orinasanao. Raha vantany vao mandeha mivantana ny fampielezan-kevitrao, UpSnap dia hampiseho ny doka findainao amin'ny mpanjifa ao anatin'ny radius dimy kilometatra. Ny tanjona dia mivelatra ivelany miankina amin'ny fisian'ny fivezivezena sy ny tariby tadiavinao.
UpSnap dia manolotra ny zava-drehetra manomboka amin'ny famolavolana doka ka hatramin'ny fanaovana tatitra:
Aorian'ny fisoratana anarana dia mahazo antso avy amin'ny UpSnap Mobile Expert mba hamaranana ny antsipirian'ny doka findainao.
UpSnap dia hamolavola sy hanisy kaody ny pejin'ny fipetrahana ary doka amin'ny sora-baventy ho an'ny orinasanao. Ny hany ilainao dia ny mamerina mijery sy mankasitraka ny kanto.
Hiseho hatramin'ny 20,000 100 isam-bolana ny dokanao amin'ny tranokala sy fampiharana an-jatony an-jatony amin'ny $ XNUMX / mo fotsiny.
Manomboha mandray antso, amin'ny fitsidihana magazay sy maro hafa. Fanampin'izay, azonao atao ny mijery ny zava-bitan'ny fampielezan-kevitrao isam-bolana Analytics tatitra.
UpSnap dia manolotra doka mavitrika miorina amin'ny toerana, mpanonta, rindranasa finday ary mombamomba ny mpanjifa.
Manolotra angon-drakitra lehibe ny SNAPalytics Analytics na dia amin'ireo mpanao dokambarotra kely indrindra aza. Fantaro ny fihetsiky ny mpampiasa ary ataovy ny fandrefesana ny fotoana tena fampielezan-kevitra hitodihana ireo mpanjifa amin'ny fotoana iray rehefa vonona ny hirotsaka izy ireo.
Tags: lasibatra ara-jeografikadokam-barotra eo an-toeranadokambarotra miorina amin'ny toeranatambajotra doka findaydokambarotra jeografia findaydoka eo an-toerana findaylasibatra findayupsnap
Ny fomba tsy fahampian'ny valiny ara-tsosialy dia manimba ny orinasanao